Bogga ugu weyn Sida Loo Bilaabo Ganacsi Qorshayn Maaliyadeed 2022
Bilawga ganacsiga qorshaynta maaliyadeed waxa ay ahayd riyada inta badan qorshayaasha maaliyadeed.
Maqaalkan ku saabsan sida loo bilaabo ganacsiga qorsheynta maaliyadeed ayaa si gaar ah loogu talagalay qorsheeyaal dhaqaale oo raba inay si madax-banaan u shaqeeyaan laakiin ma garanayo sida loo bilaabo ganacsi qorsheyn maaliyadeed.
Qorsheeyayaasha dhaqaaluhu waa khabiiro maaliyadeed oo lagu koray mas'uuliyadda ka caawinta ganacsiyada iyo shakhsiyaadka inay lacagtooda u maalgeliyaan si caqli-gal ah. Waxay tan ku sameeyaan iyagoo falanqeynaya alaabada maaliyadeed sida miisaaniyada, caymiska, iwm.
Aqoontooda ballaaran ee maaliyadda awgeed, waxay door aad muhiim ah uga ciyaaraan ganacsiga adduunka.
Iyadoo fikradda maaliyaddu ay noqon karto mid aad u adag, qaar badan oo ka mid ah qorshayaasha maaliyadeed ayaa wali ka fekeraya sidii ay u bilaabi lahaayeen ganacsi qorsheyn maaliyadeed. Si kastaba ha ahaatee, taasi waa waxa maqaalkani ku saabsan yahay.
Qorshaye maaliyadeed ahaan raba inuu bilaabo ganacsi qorshayn maaliyadeed oo wanaagsan, maskaxda ku hay inay tahay inaad iibiso wax ka baxsan badeecadaha iyo adeegyada.
Tan, waxaan ula jeednaa inaad awood u yeelato inaad saameyn ku yeelato nolosha dadka lacagta oo aad beddesho maskaxdooda ku saabsan lacagta adiga oo u soo bandhigaya nitty-gritty ee maamulka maaliyadda.
Baadhid: Waa maxay shatiyada aan u baahanahay si aan u bilaabo ganacsi?
Sida Loo Bilaabo Ganacsi Qorshayn Maaliyadeed
Ganacsiga qorsheynta maaliyadeed waa shaqo ka caawisa dadka inay qorsheeyaan yoolalkooda maaliyadeed oo ay qorsheeyaan sidii ay u gaari lahaayeen.
Dadka u shaqeeya qorsheeye maaliyadeed waxay caawiyaan macaamiishooda si ay u qorsheeyaan miisaaniyadooda, maalgelintooda, caymiska, iwm. Qorsheeyayaasha maaliyadeed waxay sidoo kale u dhaqmaan sidii tababarayaal maaliyadeed ama hagayaal macaamiishooda.
Ganacsiga qorsheynta maaliyadeed waa muhiim sababtoo ah waxay dadka ka caawisaa inay si qoto dheer oo dhab ah uga fikiraan sida lacagtu u shaqeyso iyo sida ay u saamayso dadka ku hareeraysan. Bilawga ganacsiga qorshaynta maaliyadeed maaha mid adag sida aad u malaynayso.
Sidaa darteed, haddii aad weli ku riyoonayso inaad dhisato ganacsi qorsheyn maaliyadeed adiga kuu gaar ah, ka dib raac tillaabooyinka hoose si aad u ogaato sida loo bilaabo ganacsi qorsheyn maaliyadeed.
Hubi Sidoo Kale: Sida Loo Bilaabo Ganacsi Lacag La'aan 2022
1. Qorshee Ganacsiga
Bilaabida liiskayaga sida loo bilaabo ganacsiga qorsheynta maaliyadeed waa qorsheyn. Si ganacsi kastaa u guuleysto, qorshayntu waa lama huraan.
Waxay ku siinaysaa qabyo ah waxa aad rabto in ganacsigaagu ahaado waxayna kaa caawinaysaa inaad ogaato waxyaalaha aanad weli garanayn. Marka uu jiro qorshe cad, wax walba waxay fududeeyaan fulinta.
Marxaladdan, waa inaad tixgelisaa arrimo ay ka mid yihiin kharashka bilowga, kharashka ku jira, faa'iidada aad samayn doonto, suuqa aad beegsanayso, khidmadda adeegga aad ka qaadi doonto macaamiishaada, magaca ganacsigaaga, iyo siyaabaha aad ganacsigaaga uga dhigi karto mid faa'iido leh.
Akhri Sidoo kale: Sida Loo Bilaabo Meherad leh Dhib Xumo 2022 | Casharrada Khubarada
2. Qiimaha bilowga
Si aad u socodsiiso ganacsi qorsheyn maaliyadeed waa inaad ka fikirtaa kharashka la xidhiidha socodsiinta ganacsigan. Qiimahan waxaa ku jira kharashyada caddaynta iyo kharashyada socodsiinta.
Qorsheeye maaliyadeed ahaan, waa inaad iska diiwaan gelisaa sidii lataliye maalgashi oo diiwaangashan (RIA) gobolkaaga. Qiimaha bilawgaagu wuxuu sidoo kale noqon doonaa ku dhawaad ​​$10,000 ilaa $20,000. Tan waxa ku jira kiradaada, waraaqaha sharciga ah, iwm.
3. Kharash ku lug leh
Tan waxaa ku jira kharashyada la xiriira ilaalinta ganacsiga sida caymiska, kirada, dayactirka xisaabaadka, iyo kharashka shaqada ee shaqaalaha.
4. Suuqa Bartilmaameedka
Suuqa bartilmaameedka ah ee ganacsigan inta badan waa kuwa dakhligoodu dhexaadka yahay laakiin sidoo kale waxaa la og yahay in ganacsiga, aad u tagto kuwa awoodi kara adeegyada.
Si kastaba ha ahaatee, kiiskan, ma aha kuwa dakhliga dhexe ee laakiin qiimaha sare ee suuqa sababtoo ah waxay haystaan ​​lacag ay ku maalgeliyaan waxayna sidoo kale awoodi karaan adeegyada qorsheeye maaliyadeed.
Siyaabaha aad uga dhigi karto ganacsigaaga mid faa'iido leh
Qorsheeye maaliyadeed ahaan, waxaad lacag ku samaynaysaa kharashka adeegga ee aad ka qaado macaamiishaada. Waxa kale oo aad ka qaadi kartaa macaamiishaada boqolkiiba hantidooda maamulka.
Kharashka adeegga waxaad ka qaadi doontaa macaamiishaada
Kharashka caadiga ah ee maaraynta maalgashiga waa inta u dhaxaysa 1% ilaa 2%. Marka laga reebo maalgashiga, qorshayaasha kale waxay ku kici karaan inta u dhaxaysa $1800 ilaa $10,000 iyadoo ku xidhan galka macmiilka.
1. Magaca Ganacsiga
Magaca ganacsigu aad buu muhiim ugu yahay ganacsi kasta waana adag tahay in la helo. Tani waa sababta oo ah magaca ganacsigaagu waa inuu u soo diro fariinta macaamiishaada ku saabsan sumaddaada waana inay ka dhigtaa inay jecel yihiin oo aaminaan astaantaada.
Kahor intaadan isdiiwaangelin ganacsigaaga, booqo diiwaanka qaranka iyo gobolka si aad u raadiso magacyada aad maskaxda ku hayso, goobaha warbaahinta bulshada, iyo boggaga internetka.
2. Samee Hay'ad Sharci ah
Tani waa gelida xigta ee liiskayaga sida loo bilaabo ganacsiga qorsheynta maaliyadeed. Marxaladdan, waa inaad tixgelisaa nooca ganacsiga aad rabto.
Ma lahaansho keli ah, mas'uuliyad xaddidan, ama shirkad? Go'aanso midka aad rabto.
Abuuritaanka shirkad ganacsi aad bay muhiim ugu tahay ganacsi kasta oo haddii aad doorato LLC ama shirkad, waxay ganacsigaaga ka ilaalin doontaa kiisaska maxkamadaha maaliyadeed.
3. Isdiiwaan gelinta cashuuraha
Waa kuwan qayb kale oo muhiim ah oo ah sida loo bilaabo ganacsiga qorsheynta maaliyadeed. Marka laga hadlayo cashuuraha, dal iyo dawlad kasta waxa loo qoondeeyay qayb ka mid ah cashuuraha.
Bixi canshuurtaada, waxay noqon kartaa canshuurta federaalka ama canshuurta gobolka ka hor inta aadan xitaa bilaabin ganacsigaaga.
Ganacsi kastaa wuxuu leeyahay canshuur uu bixiyo canshuurahaasna waxaa loo qeybsadaa si ka duwan mid ka mid ah shirkadaha gaarka loo leeyahay.
4. Furo akoon ganacsi
Shirkad kastaa waxay u baahan tahay akoon si ay u hawlgasho fudud iyo ilaalinta hantida. Markaad isla xisaabtan la isticmaasho shirkaddaada, waxay saamayn kartaa hantidaada kiis lagu dacweeyo.
Waxaa jira faa'iidooyin u furashada akoon ganacsi oo ganacsigaaga shaki kuma jiro in tani ay ku jirto liiskayaga sida loo bilaabo ganacsiga qorsheynta maaliyadeed.
Faa'iidooyinkaas waxaa ka mid ah:
Waxay kala soocaysaa hantidaada gaarka ah iyo tan shirkaddaada.
Waxay fududaynaysaa xisaabinta iyo cashuuraha.
5. Samee diiwaan xisaabeedka
Shirkadu waxay u baahan tahay inay lahaato diiwaan xisaabeed sababtoo ah waxay caawisaa inta lagu jiro cashuuraynta, xisaabinta, iyo miisaaniyada sidoo kale. Tani waa in aan la dayacin marka la qorsheynayo sida loo bilaabo ganacsiga qorsheynta maaliyadeed.
6. Qaado rukhsadda iyo shatiga
Heerkan, waxaa lagaa rabaa inaad ruqsad iyo shati ka hesho dawladda gobolka ama dawladda dhexe.
Haddii shatiyadaan iyo ruqsadaha aan la helin, markaas waxaad bixin doontaa kharashyo culus oo ku saabsan ku shaqeynta ruqsad la'aan iyo shatiga ganacsigaagana waa la xiri karaa mar uun.
XIDHIIDHKA: 10-ka Soo-saare ee ugu Fiican Guriga 2022
Sidaa darteed, waa inaadan khalad samayn inaad iska indho tirto tan markaad qorsheynayso sida loo bilaabo shirkad qorsheynta maaliyadda.
Marka la qorsheynayo sida loo dhiso ganacsi qorsheyn maaliyadeed, caymiska waa in la tixgeliyaa. Inta uu ganacsigaagu u baahan yahay rukhsad iyo shati, waxa uu sidoo kale u baahan yahay caymis hawlo sax ah.
Caymiskani wuxuu ka ilaaliyaa ganacsigaaga arrimaha maaliyadeed haddii ay dhacdo khasaare. Noocyada kala duwan ee caymiska ganacsiyada waa Caymiska Mas'uuliyadda Guud iyo Caymiska Magdhawga Shaqaalaha.
Caymisyadan ayaa labadaba looga baahan yahay habsami u socodka ganacsi kasta.
8. Qeex astaantaada
Summadaada waa inaan laga tegin marka la qorsheynayo sida loo dhiso ganacsi qorsheyn maaliyadeed. Aragti noocee ah ayaad rabtaa inaad siiso macaamiishaada?
Tani waa su'aal muhiim ah oo aad is waydiiso markaad qeexayso astaantaada. Xusuusnow, shirkad kastaa waxay u baahan tahay sumad sababtoo ah waxay muujinaysaa waxa ganacsigaagu u taagan yahay iyo sida ay dadweynuhu u arkaan ganacsigaaga.
Haddii calaamaddaadu leedahay aragti xooggan, markaa waxay ka soo bixi doontaa tartamayaashaada.
9. Abuur Website
Tani waa gelitaan kale oo liiskayaga ku saabsan sida loo bilaabo ganacsi xagga qorsheynta maaliyadeed. Marxaladdan waxa la sameeyaa ka dib marka ay tahay inaad qeexdo ganacsigaaga.
Markaad abuurayso degel, waa inaad tixgelisaa is-dhexgalka isticmaalaha iyo waayo-aragnimada isticmaalaha sababtoo ah macaamiishaadu waxay u baahan yihiin inay yeeshaan khibrad sahlan oo sahlan marka la isticmaalayo bogga internetka.
Haysashada mareegaha waxay ka dhigaysaa shirkaddaada mid sharci ah. Waxa kale oo aad abuuri kartaa bog Facebook ah, astaanta ganacsiga LinkedIn, gacanta Instagram, iwm.
10. Samee habka telefoonkaaga ganacsiga
Tani waa wejigii ugu dambeeyay ee aad u baahan tahay inaad tixgeliso markaad dejinayso ganacsi qorsheyn maaliyadeed. Way xumaan doontaa marka macmiilku u baahdo adeeggaaga laakiin aanu la xidhiidhi karin ganacsiga.
Sidaa darteed, waa in aad haysatid nambar telefoon oo rasmi ah oo macaamiishaadu si toos ah u gaadhi karaan ganacsigaaga.
Faa'iidooyinka Lahaanshaha Qorsheeyayaal Maaliyadeed
Marka laga reebo tillaabooyinka kor ku xusan sida loo bilaabo shirkad qorsheynta maaliyadda. Waxa kale oo jira faa'iidooyin ay leedahay in uu kuu shaqeeyo qorsheeye maaliyadeed oo faa'iidooyinkani waa:
Si loo ilaaliyo adiga iyo ganacsigaaga inta lagu jiro qorshahaaga, hadday tahay kaydka ama maalgashiga.
Si lagaaga caawiyo abuurista miisaaniyad bille ama sanadle ah hawlgabkaaga, kaydkaaga, ama maalgashigaaga.
Waxay ka caawiyaan dhimista khatarta maaliyadeed ee macaamiishooda.
Waxay ka caawiyaan macaamiishooda inay maareeyaan xasaradaha ganacsigooda ama maalgashigooda.
Dhammaan kuwan waa faa'iidooyinka in uu kuu shaqeeyo qorsheeye maaliyadeed waxayna ku caawinaysaa haddii aad awooddo adeegyadooda. Tani waa sababta qorshayaasha maaliyadeed ay si adag ugu shaqeeyaan si ay u helaan macaamiil qiimo sare leh.
Waxaa jira xirfado loo baahan yahay si loo dhiso shirkad dhaqaale oo wanaagsan oo si degdeg ah u koraysa waxayna kala yihiin; waxbarashada rasmiga ah iyo tababarka, xirfadaha maamulka lacagta, awood u leh inay sharaxaad ka bixiyaan fikradaha adag macaamiisha, faham wanaagsan ee xisaabta maaliyadeed, suuqyada maaliyadeed, iyo muhiimadda ay u leeyihiin aadanaha.
Shirkadahani waxay sidoo kale qabtaan hawlo maalinle ah sida diiradda saaraya Hantida Maaraynta hoos yimaada (AUM) sababtoo ah hantida badan ee ay maamulaan lacag badan oo ay sameeyaan. Waxa kale oo ay keenaan macaamiil cusub iyagoo qabanaya shirar, iimaylo, iyo xataa macaamiisha hadda jirta.
XIDHIIDHKA: Waa Maxay Suuqgeynta Sumcadda Iyo Sidey Iigu Shaqaysaa
In kasta oo ganacsigu faa'iido badan leeyahay iyada oo ku xidhan macaamiisha aad leedahay, qof kastaa ma doonayo in uu ganacsi noocan oo kale ah sameeyo.
Adiga oo ah maamule maareeyaha shirkad qorsheynta maaliyadda, waa in aad awood u yeelatid in aad shaqeyso saacado badan, aad jeceshahay wax kasta oo khuseeya maaliyadda, aad xiisaynayso cilmi-nafsiga aadanaha, iyo sidoo kale in aad leedahay is-xakameyn iyo edbin heersare ah.
Tusaale ahaan, macmiilku waxa uu u baahan karaa in laga caawiyo xakamaynta habka uu lacagta u isticmaalo, laakiin sababta oo ah ma aadan fahmin taas, waxaad horay u sii wadaa inaad geliso lacagta taas oo ka soo horjeeda rabitaanka macmiilka.
Waa maxay sababta qorshaynta maaliyadeed muhiim ugu tahay qof kasta?
Waa muhiim sababtoo ah waxay gacan ka geysataa hagista go'aan qaadashada maalinlaha ah ee ganacsigeena ama nolosheena gaarka ah.
Waa maxay 70 20 10 xeerka lacagtu?
Waxay leedahay 70% dakhligaagu waa kharashyadaada bishii, 20% waa kaydinta iyo maalgashiga, 10% kalena waxay ku baxaan deymo ama deeqo.
Waa maxay qaybta koowaad ee muhiimka ah ee qorshaynta maaliyadeed?
Qaybta ugu horreysa ee muhiimka ah waa fahamka socodka lacagta caddaanka ah. Ogaanshaha socodka lacagta caddaanka ah ayaa ku siinaysa fursad aad ku isticmaasho 70 20 10 xeerka lacagta.
Waa maxay qorshaynta miisaaniyada?
Tani waa dhismaha miisaaniyada ka dibna u isticmaal si aad u maamusho hawlaha ganacsigaaga. Kahor intaadan bilaabin qorsheynta miisaaniyada, waxaad u baahan tahay inaad marka hore dhisto miisaaniyad.
Waa maxay faraqa u dhexeeya miisaaniyad-samaynta iyo qorsheynta maaliyadeed?
Miisaaniyadu waa sida uu hadda u eg yahay sawirkaaga maaliyadeed wuxuuna kaa caawinayaa inaad doorato sida aad wax u kharash gareyn lahayd oo aad u kaydsan lahayd bil kasta, halka qorshaynta maaliyadeed ay tahay sawirka ugu wayn ee dhaqaalahaaga waqti ka dib.
Waa maxay qaybta ugu muhiimsan ee qorsheynta maaliyadeed?
Qaybta ugu muhiimsan ee qorsheynta maaliyadeed ee macmiilka waa miisaaniyad-samaynta. Waxaa laga yaabaa inaad u fududaato inaad dejiso miisaaniyad, laakiin ku dhegganaanta waa arrin kale.
Waxaan eegnay sida loo bilaabo ganacsi qorsheyn maaliyadeed meel kasta oo dalka ah. Qorsheeyaha maaliyadeed ee xirfada leh ayaa wax ka qaban kara in ka badan 200 oo macaamiil ah isaga oo aan shaqaale qorin caawimo laakiin wali wuu shaqaaleysiin karaa marka ay u arkaan inay ku habboon yihiin.
Waxaad sidoo kale raadin kartaa lataliye sababtoo ah socodsiinta ganacsiga qorsheynta maaliyadeed maaha mid fudud sida ay u muuqato.
Hal qof ayaa maamuli kara shirkad qorsheynta maaliyadda oo u kori kara shirkad malaayiin doolar ah.
Tusaalooyinka shirkadaha ka koray koox-nin kaliya ilaa shirkado milyan-dollar ah waana Blue Ocean Global Wealth iyo Adeegyada Maaliyadeed ee Edelman.
Intee In le'eg Ayaad Kasban Kartaa Markaad Ku Jirto Lambarka Bulshada 2022
Siyaabaha ugu Wanaagsan ee Lacag Loogu Siin Karo Dugsiga Kalkaalinta 2021
Xirfadda kalkaalisada waa mid faa'iido badan leh. Waxaa jira ilaa 2.86 milyan kalkaaliyaal caafimaad oo diiwaangashan oo ka shaqeeya…
Waa immisa Qiimaha Nadiifinta Roogga Qolkiiba?
Ma u baahan tahay in qolkaaga la nadiifiyo oo aad la yaabto intee ayay tahay kharashka nadiifinta roogaga? Akhriso. wasakh ah…
15ka Nidaam ee Ammaanka Guriga ugu Wanaagsan ee Lala socdo ee 2022
Nidaamyo badan oo amniga guriga ah ayaa si xirfadeysan loo maareeyaa, sidaa darteed xarunta la socodka waa 24 saac maalin kasta.
Dad badan ayaa la yaabay markii ay ogaadeen in alxanka uu yahay mid ka mid ah xirfadaha ganacsi ee ugu mushaarka badan dalka…
Daqiiqad 42 akhri
Aasiya waxay had iyo jeer ahayd mid ka mid ah Qaaradaha kobciya shirkadaha gaarka ah ee qaybaha kala duwan iyo Hindiya waa…